Abakhiqizi bensimbi engagqwali - China Ifektri engagqwali ipuleti, abahlinzeki
304 ishayela i-nickel sheet yensimbi yegolide yombala we-nickel ishidi lokudlidliza kwensimbi ukuqeda amapuleti wensimbi angenasici
Uyini ishidi lensimbi elingenalutho elingama-304?
Insimbi engagqwali engama-304 ucingo lokudweba ipuleti ukuthungwa okufana nentambo ebusweni bensimbi engagqwali.
Lokhu nje ubuchwepheshe bokucubungula bensimbi engenasici. Ubuso bungu-matt, futhi kunomkhondo wokuthungwa kuwo ngokucophelela, kepha awuzwakali.
Imelana kakhulu nokugqokwa kunokujwayelekile insimbi engagqwali ekhanyayo futhi kubukeka kuthuthuke kakhulu.
Ubuso obuhle nokusetshenziswa okuhlukahlukene; ukumelana nokugqwala okuhle, ukuqina okude kunensimbi ejwayelekile, ukumelana nokugqwala okungcono; amandla aphezulu, ngakho-ke kungenzeka ukusebenzisa amapuleti amancane; ukushisa okuphezulu kwe-oxidation namandla aphezulu, ngakho-ke kungamelana nomlilo; ukucutshungulwa okujwayelekile kokushisa, okungukuthi, ukucutshungulwa okulula kwepulasitiki. Ngoba asikho isidingo sokwelashwa kwendawo, kulula futhi kulula ukuyinakekela; ihlanzekile, isiphetho esiphakeme; ukusebenza kahle kwe-welding
Ikhwalithi ephezulu ye-Wuxi mill ukuthekelisa i-SUS 304 ipuleti lensimbi engagqwali
Uyini umehluko phakathi kwensimbi engagqwali engu-304 no-316:
304 ipuleti lensimbi engagqwali iyamelana nokugqwala nge-sulfuric acid, i-phosphoric acid, i-formic acid, i-urea, njll., futhi ilungele amanzi ajwayelekile, igesi yokulawula, iwayini, ubisi, uketshezi lokuhlanza i-CIP nezinye izikhathi ezinokubola okuphansi noma ukungathintani nezinto zokwakha. 316L steel grade unezele molybdenum element ngesisekelo 304, ezingasetshenziswa kakhulu ngcono ukumelana yayo ukugqwala intergranular kanye oxide ukucindezeleka ukugqwala futhi ukunciphisa ukuthambekela of ngokuhlaziya ashisayo ngesikhathi Welding. It Ubuye ukumelana okuhle chloride ukugqwala. Imvamisa isetshenziswa emanzini amsulwa, amanzi acolisisiwe, imithi, amasoso, uviniga nezinye izikhathi ezinezidingo eziphakeme zenhlanzeko kanye nezakhiwo ezinamandla zokugqwala imidiya. Intengo ka-316L icishe iphindwe kabili kunaleyo engama-304. Izakhiwo ezinomshini ezingama-304 zingcono kunezika-316L. Ngenxa yokumelana nokugqwala nokumelana nokushisa kwe-304 kanye ne-316, zisetshenziswa kakhulu njengensimbi engenamakhaza emelana nokushisa. Amandla nobulukhuni buka-304 no-316 kuyafana. Umehluko phakathi kwalokhu ukuthi ukumelana nokugqwala okungu-316 kungcono kakhulu kunalokho kuka-304. Iphuzu elibaluleke kakhulu ukuthi insimbi ye-molybdenum yengezwe ku-316, okuthuthukisa ukumelana nokushisa.
321 Hot Hot iphuma Insimbi engagqwali ipuleti
Incazelo cishe ngensimbi engagqwali engu-321 / 321H
Igcina ukumelana okuhle nokugqwala okungaphakathi kwamazinga okushisa kuze kufike ku-800-1500 ° F (427-816 ° C) nemvula ye-chromium carbide. Ngenxa yokwengezwa kwe-titanium ekwakhiweni, ipuleti lensimbi engagqwali engu-321 isengagcina ukuzinza esimweni sokwakheka kwe-chromium carbide.
Ipuleti lensimbi engu-321 eshisayo eligoqiwe linezinzuzo endaweni ephezulu yokushisa ngenxa yezakhiwo zalo ezinhle kakhulu. Uma kuqhathaniswa ne-304 alloy, i-321 ingxubevange yensimbi engenasici ine-ductility engcono nokumelana nokucindezelwa kokuphuka. Ngaphezu kwalokho, i-304L nayo ingasetshenziselwa ukulwa nokuqina kanye nokugqwala kwangaphakathi.
I-alloy 321 (UNS S32100) iyinsimbi engagqwali ezinzile. Igcina ukumelana okuhle nokugqwala okungaphakathi kwamazinga okushisa kuze kufike ku-800-1500 ° F (427-816 ° C) nemvula ye-chromium carbide. Ngenxa yokwengezwa kwe-titanium ekwakhiweni, ipuleti lensimbi engagqwali engu-321 isengagcina ukuzinza esimweni sokwakheka kwe-chromium carbide. Ingxubevange 347 ingenxa yokwengezwa kwe-niobium ne-tantalum ukuze kugcinwe ukuqina kwayo. .
Ama-Alloys 321 kanye nama-347 ajwayele ukusetshenziselwa ukusebenza isikhathi eside ngo-800-1500 ° F (427-816 ° C) ezindaweni ezinokushisa okuphezulu. Uma uhlelo lokusebenza lubandakanya ukushisela kuphela noma ukushisa kwesikhashana, kufake i-304L esikhundleni salo.
Izinzuzo zokusebenza okushisa okuphezulu kwama-alloys angama-321 no-347 ancike nasezakhiweni zawo ezinhle zomshini. Uma kuqhathaniswa no-304, 304L, 321 no-347 banokucindezeleka okungcono kokucindezeleka nokucindezela kokuqhekeka kwengcindezi. Lokhu kuvumela ingcindezi yala ma-alloys azinzile ukuhlangabezana nemithethonqubo yama-boiler yaseMelika kanye nemininingwane yezikebhe zokucindezela ezingeni lokushisa eliphezulu. Ngakho-ke, ukushisa okuphezulu kokusebenza kwama-alloys angama-321 no-347 kungu-1500 ° F (816 ° C), kanti ama-304, 304L anqunyelwe ku-800 ° F (426 ° C).
I-321 ne-Alloy 347 nazo zinokuqukethwe okuphezulu kwekhabhoni, izinombolo zazo ze-UNS yilezi: S32109 ne-S34709.
409 409L Hot asongwe Engagqwali Plate
Ubukhulu: 1.2mm - 16mm
Pallet isisindo: 1.0MT - 3.0MT
410 410s Hot iphuma Engagqwali Plate steel
Uyini umehluko phakathi kwensimbi engagqwali engu-409 no-410:
I-409 — ngaphandle kokungezwa kwe-titanium, imodeli eshibhe kakhulu, evame ukusetshenziswa njengepayipi lokukhipha imoto, iyinsimbi engenasici i-ferritic (i-chrome steel), elungele ukushisela, izindleko eziphansi, ipayipi lokukhipha isitimu somugqa, nomugqa womlilo
410 — IMartensite (insimbi enamandla aphezulu ye-chrome), ukumelana nokugqoka okuhle nokumelana nokugqwala okungalungile, okulungele ukupompa. Ukwakheka kwawo kwamakhemikhali kuqukethe i-13% ye-chromium, i-0.15% noma i-carbon engaphansi nenani elincane lama-alloys we-elemental. Izinto zokusetshenziswa zishibhile, zinamandla kazibuthe, futhi ziba lukhuni ngokwelashwa kokushisa. Ukusetshenziswa okujwayelekile kufaka phakathi amabheringi, imishini yezokwelapha namathuluzi namapaneli ezinto ezisetshenziswayo, nezingxenye eziqinile.
Insimbi engagqwali engu-410 430 430F 430LX
410 insimbi engagqwali ilingana ne-1Cr13 insimbi engagqwali i-S41000 (i-American AISI, ASTM). 0.01% i-carbon, i-0.13% i-chromium 0.1 410 insimbi engagqwali: ukumelana nokugqwala okuhle, ukungasebenzi kahle, izindwani zenhloso ejwayelekile, ama-valve.
Ukwelashwa ngokushisa kwe 410 insimbi engagqwali: isixazululo sokwelashwa (° C) ukupholisa okuhamba kancane okungu-800-9000 noma ukupholisa okusheshayo okungu-750
Insimbi engagqwali engu-430 inokumelana okuhle kokugqwala kanye nensimbi ejwayelekile yensimbi, ukuqhutshwa kokushisa okushisayo kungcono kune-austenite, i-coefficient yokwanda okushisayo incane kune-austenite, ukukhathala kokushisa, ukungeza ukuzinza kwe-titanium, nezakhiwo zomshini wesayithi le-weld zilungile. Okwakha umhlobiso, izingxenye zokushisa uphethiloli, izinto zasendlini, izingxenye zemishini yasendlini.
I-430F ibanga lensimbi elinendawo yokusika mahhala ngensimbi engu-430. Isetshenziswa kuma-lathes othomathikhi, amabhawodi namantongomane.
I-430LX ingeza i-Ti noma i-Nb ku-430 yensimbi, yehlisa okuqukethwe kwe-C, futhi ithuthukise ukucubungula nokusebenza kahle. Isetshenziswe kumathangi wamanzi ashisayo, izinhlelo zamanzi ashisayo, izinto zasendlini ezihlanzekile, izinto zasendlini ezihlala isikhathi eside, ama-flywheels ebhayisikili, njll.
430 Hot Hot iphuma Insimbi engagqwali ipuleti
Ukuqhathanisa insimbi engagqwali engu-304 nensimbi engagqwali engu-430:
1. Corrosion ukumelana: 430 insimbi engagqwali iqukethe i-chromium engu-16.00-18.00%, empeleni engenayo i-nickel metal. Insimbi engagqwali engu-304 iqukethe insimbi eningi ye-chromium ne-nickel, ngakho-ke ukumelana nokugqwala kwensimbi engagqwali okungu-430 kungcono kunensimbi engagqwali engu-304.
2.ukuzinza: 430 insimbi engagqwali i-ferrite, i-304 insimbi engagqwali i-austenitic, i-304 insimbi engagqwali izinzile kakhulu kunensimbi engenasici engu-430,
3.ubunzima: insimbi engagqwali engu-304 inesibindi esiqinile, esinamandla kune 430 insimbi engagqwali
Ukuqhutshwa kwe-4. 430 insimbi engagqwali I-ferrite ingcono kune-304 insimbi engenasici i-austenitic yokudlulisa ukushisa,
Izakhiwo 5.mechanical: 430 insimbi engagqwali ingeze into ezinzile yamakhemikhali ye-titanium, izakhiwo zomshini wesayithi le-weld zingcono kunensimbi engenasici engama-304.
2507 Hot Hot iphuma Insimbi engagqwali ipuleti
Kuyini 2507 Hot ipuleti Insimbi engagqwali ipuleti
2507 insimbi engagqwali ye-ferritic-austenitic (duplex). Ihlanganisa izakhiwo eziningi ezizuzisayo zensimbi ye-ferritic nensimbi ye-austenitic. Ngenxa yokuthi insimbi iqukethe i-chromium ephezulu ne-molybdenum, inokumelana okuhle kakhulu ekuphingeni, ekugqobeni kokugqwala nokugqwala okufanayo. Isigaba esimbaxambili se-microstructure siqinisekisa ukuthi insimbi inokumelana okuphezulu nokucindezela ukugqwala kwemfucumfucu, namandla emishini nawo aphezulu.
Ipuleti lokuhlola insimbi engagqwali
Kuyini ipuleti lensimbi engagqwali
Ipuleti lokuhlola insimbi engagqwali: Ipuleti lokuhlola lisebenzisa amandla adonsela phansi omshini ukushaya izimbobo zezinhlobonhlobo nobukhulu engxenyeni engagqwali ebusweni.Imbali yeHeringbone, i-oval encane, i-millet flower, i-pin engu-5, imbobo eyindilinga eyindilinga, imbobo emise okwe-inkinobho, njll. I-1.non-slip, isikhathi sokusetshenziswa eside; ukuvimbela umlilo nokuvikela umswakama, kulula ukukhuhla kuhlanzekile; inqubo yokufaka okulandelayo ye-3 ingenziwa ngaphandle kwezigxivizo zeminwe.
Ukupholisha i-Electrolytic: kusetshenziswa i-acid ene-electrolyte (i-asidi enamandla), isampula okufanele ipholishwe ibekwe ku-post-current (cishe i-7 mA), futhi i-anode iyachithwa. Ngenxa yobukhulu bamanje, izingxenye eziphumayo zincibilika ngokushesha okukhulu, futhi indawo ijwayele ukuba yicaba, ifinyelele kumphumela wokugcina Ophucuziwe (umphumela ungabonakala cishe emizuzwini eyi-10). Isisekelo esiyisisekelo se-electropolishing: kufana nokupholisha kwamakhemikhali, okungukuthi, ngokukhetha ngokuqeda ingxenye encane ye-convex ebusweni bento yokwenza ubuso bushelelezi. Uma kuqhathaniswa nokupholisha kwamakhemikhali, umphumela wokusabela kwe-cathode ungaqedwa, futhi umphumela ungcono.
Ukupholisha ngomshini: Ukuze ubuso obubi bepuleti lensimbi engagqwali ukufeza umphumela wokuhlobisa kufanele kube: uzimele we-roller upholishiwe ngomshini wokupholisha webhande, okokuqala ngebhande le-120 elibhidlizayo, phonsa umbala ongaphezulu kwesinye isikhathi, shintsha i-240 # ibhande elihuqayo, liphonse ebusweni Lapho umbala usuphezulu, shintsha ibhande eliwu-800 # elicasulayo bese uliphonsa kumbala ongaphezulu ngasikhathi sinye. Bese ushintsha ibhande eliyi-1200 # elicasulayo bese uphonsa umphumela wokuhlobisa ipuleti lensimbi engagqwali.
Ukugingqa okushisayo manje sekuzacile njengo-0.78mm. Ubuso bepuleti elishisayo linezinkinga ezifana nesikali sensimbi ne-pitting. Ishidi eligoqiwe elishisayo linobulukhuni obuphansi, ukucubungula okulula kanye nokuqina okuhle. Amashidi wensimbi asongwe ashisayo, izakhiwo zemishini zincane kakhulu kunokucubungula okubandayo, kanti okwesibili ukwakha ukucutshungulwa, kepha kunokuqina okungcono nokuqina.
I-316 iyinsimbi ekhethekile engenasici, ngenxa yokwengezwa kwezakhi ze-Mo ekumelaneni nokugqwala, futhi amandla okushisa aphezulu athuthuke kakhulu, izinga lokushisa eliphakeme elifinyelela kuma-1200-1300 degrees, lingasetshenziswa ngaphansi kwezimo ezinzima. I-316L uhlobo lwensimbi engagqwali ye-molybdenum. Ngenxa yokuqukethwe kwe-molybdenum ngensimbi, ukusebenza okuphelele kwale nsimbi kungcono kunalokho kwensimbi engagqwali engu-310 no-304. Ngaphansi kwezimo zokushisa okuphezulu, lapho ukugxila kwe-sulfuric acid kungaphansi kuka-15% noma ngaphezulu kuka-85%, insimbi engagqwali engu-316L inebanga elibanzi. sebenzisa. Insimbi engagqwali ye-316L nayo inokumelana okuhle nokuhlaselwa kwe-chloride ngakho-ke isetshenziswa kakhulu ezindaweni zasolwandle. Insimbi engagqwali engu-316L inokuqukethwe okuphezulu kwekhabhoni okungu-0.03 futhi ingasetshenziswa kuzinhlelo zokusebenza lapho kungenziwa khona ukuthimisa futhi kudingeka ukumelana nokugqwala okuphezulu.